Hiran State - News: Wasiirka warfaafinta Hiiraan State oo soo dhaweeyey shirka Kenya
Wasiirka warfaafinta Hiiraan State oo soo dhaweeyey shirka Kenya
Jimco (hiranstate.com)- Wasiirka wasaarada warfaafinta dowlad goboleedka Hiiraan State Amb. A/qadir Abdulle Xoshow oo ka hadlayey isbedelada siyaasadeed ee ka curtay dalka Somaliya ayaa sheegay in maamul goboleedka Hiiraan State uu soo dhaweynayo shirka ay qaramada midoobay ku qabaneyso dalkaasi Kenya, kaasi oo ay ka soo qeyb galayaan qeybaha kala duwan ee shacabka Somaliyeed bal si loo helo xal waara iyo isfaham bulshada Somaliyeed dhex mara.
Intaasi kedib ayuu wasiirka ku dhiiragaliyey TFGda iney tagaan ama ay ka qeyb galaan shirkasta oo leys kugu keenayo shacabka Somaliyeed maadama ay iyaga ka kaabiyeen arimaha noocaasi ah. wasiirka oo sii hadlayo ayaa sidoo kale ku nuux nuuxsaday in hogaanka dalka looga baahan yahay iney la yimaadaan isbedel siyaasadeed ayna ogaadaan xiligii shacabka Somaliyeed qaarkood ay hurdada dheer ku jireen oo ay Somalinimada kaligood raadinayeen in aan hada lagu jirin, sidaasi daraadeed waa lama huraan maadama waqtiga u haray TFGda uu gabaabsi yahay iney danta shacabka eegaan halkii ay iyagu hormuud u noqon lahaayeen fowdada dalka ka jirta.
Amb. Xoshow ayaa sheegay in aysan TFGda uga fadhiyin iney dhulkooda u islaaxiso amaba u nabadeyso laakinse looga baahan yahay wadashaqeynta dastuuriga ah iney dhinacooda adkeeyaan si taasi loo helane waa iney u hogaansamaan ama ay hormuud u noqdaan shirkasta oo leys kugu keenayo shacabka Somaliyeed hadiiba lagu helayo amaba ay ka soo baxeyso wax uun tanaasul ah oo bulshada dhex mara.
Hiiraan State waxey soo dhaweyneysaa amaba aaminsan tahay nidaamka federal system-ka ah cidkasta oo Somali ah oo aanu arintaas isku si u aragnane waanu soo dhaweyneynaa ayuu yiri wasiirka. inkasta oo uu wasiirka ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo dadaalo dhinaca militeriga ah oo ay HS ka wado gudaha Hiiraan hadane waxuu sheegay in aysan shacabka Somaliyeed u baahneyn hogaamiyaal danta shacabka caqabad ku noqda.
Mar aanu wasiirka weydiinay su'aal aheyd in ay TFGda kalkoonida kala laabanayan maamulka HS iyo in kale ayuu ku jawaabay awalba galsooni inta shacabka Hiiraan iskugu yimideen aanu siinay ayaanba jirin, halkii ay naga dhiiragalin lahaayeena xiligii aanu ku mashquulsaneyn dhisitaanka Hiiraan State-na dagaal hoose ayey nagula jireen qaar ka mid ah hogaanka dalka ugu sareeya inkasta oo aanu ka guuleysanay dhagartoodii.
Hiran State waa maamul ku yimid rabitaanka shacabka Hiiraan hadey noqon laheyd maskax, dhaqaalo, abaabul iyo dhiiragalin, shacabkii dhisay ayaa ilaa maanta bixiya dhaqdhaqaaqa iyo howlaha madaxweynaha Hiiraan State iyaga ayaana bilaaw ilaa dhamaad iska leh maamulka sidaasi daraadeed go,aankasta oo aanu ka qaadaneyno TFGda waxuu noqon doonaa mid ku yimaada la tashi iyo iska warqab ayuu hadalkiisa ku soo gabo gabeeyey wasiirka.
· admin on April 01 2011 17:45:25 · 0 Comments · 1883 Reads ·
14,614,257 unique visits